मोबाइल उद्योग तातो माथि | Martech Zone
शनिबार, जुलाई २१, २०१। आइतवार, सेप्टेम्बर 29, 2013 Douglas Karr
मोबाइल उद्योग वास्तवमै तापिरहेको छ - र मोबाइल मार्केटिंग अनुसरण गर्न निश्चित छ। सायद सबै भन्दा राम्रो सुधार तेस्रो पक्ष अनुप्रयोगहरू चलाउने क्षमता भएको छ।
बजार विश्लेषण फर्म एबीआई रिसर्चले जारी गरेको नयाँ पूर्वानुमानका अनुसार २०१ in मा मोबाइल मार्केटिंग राजस्व २०१ in मा विश्वव्यापी २ billion अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ। मुहान: भयंकर वायरलेस बाट एबीआई अनुसन्धान.
ओभरको साथ एप्पलको आईफोन द्वारा लेड Billion महिनामा १ अरब अनुप्रयोग डाउनलोड, ब्ल्याकबेरी, Verizon, माईक्रोसफ्ट र एन्ड्रोइड पक्का गर्न निश्चित छन्। उच्च रिजोलुसनहरू, उत्तम उपयोगिता र नयाँ फोनमा पूर्ण कुञ्जीपाटी नियन्त्रणहरूले उद्योग खोल्दै, प्रसंस्करण गति र मेमोरीको साथ। बजारमा पनि पुराना खेलाडीहरू पुनर्जन्म हुँदैछन् ... नोकिया N97 जाँच गर्नुहोस्। (LL Cool J को साथ भाइरल विज्ञापनलाई पनि मनपर्दछ)
यदि तपाईं भिडियो देख्नुहुन्न भने, पोष्टको माध्यमबाट क्लिक गर्नुहोस्, मोबाइल उद्योग तातो माथि। म मोबाईलको साथ साथै मसँग हुनु हुँदैन ... शाब्दिक मात्र ब्ल्याकबेरीमा स्नातक गर्दै। मित्र र मोबाइल मार्केटिङ गुरु, एडम सानो, चाँडै केहि पोस्टहरू लेख्दै हुनेछ Martech Zone र म यसको लागि तत्पर छु!
टैग: मोबाइल उद्योगमोबाइल मार्केटिङ
मोबाइल उद्योग मा महान पोस्ट! म योगदान गर्न तत्पर छु।